မြန်မာနိုင်ငံက ရဲစုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မြန်မာနိုင်ငံက ရဲစုတ်
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 20, 2011 in My Dear Diary, Opinions & Discussion | 33 comments
ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးပြီး ရွာထဲ တင်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးနေတာတော. ကြာပြီ သိတဲ.အတိုင်း လိုင်းသိပ်မကောင်းတာနဲ. အင်တာနက်ဆိုင်လည်းသိပ်မရောက်ဖြစ်ဘူး ရောက်တော.လည်း သတင်းလေးတွေလောက်ပဲ ကြည်.ပြီးပြန်လာတာကများတယ် အခုတော. မေ၇းတာကြာနေတဲ.အတွက် လိုင်းနှေးတာတောင် သည်းခံစောင်.ပြီး တင်းပေးလိုက်တာပါ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းနှစ်က အဖြစ်အပျက်လေးပါ သိပ်တော.မကြာသေးပါဘူး ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ 2007-2008 ကပေါ. ကျွန်တော်နေတာက သုဝဏ္ဏက ပေါ်ဆန်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ. မဟာသုဝဏ္ဏကျောင်းတိုက်မှာပါ ကျွန်တော်တို. စာသင်ကျောင်းကိုသွားရင် လမ်းမှာ အမြဲတွေ.နေရတဲ. အမှိုက်ပုံကြီးနားမှာ အမြဲတမ်း သန်.ရှင်းရေး လုပ်နေတဲ. စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေပေါ.ဗျာ သူတို.ထဲမှာ စည်ပင်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘဲ အမှိုက်တွေလိုက်ကောက် ပြန်ရောင်းလို.ရတာလေးတွေကို ပြန်ရောင်းပြီး ၀င်ငွေရှာတဲ.သူတွေလည်းပါတယ်ဗျ ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ.အထဲမှာ 16 နှစ်လောက်ရှိတဲ. ခပ်ချောချောကောင်မလေး တစ်ယောက်လည်းပါတယ် ကျွန်တော်တို.နဲ. အဲဒီတုန်းက အရွယ်တူလောက်ပေါ.ဗျာ ဘ၀ပေးအခြေအနေ ကြောင်.သာ ကျွန်တော်တို.လို အရွယ်မှာ ပညာမရှာနိုင်တာ ချောတာကတော. တော်တော်ကိုချောတယ်ဗျ သူ.ရုပ်ရည်လေးနဲ.ဆို ဒီလိုရန်ကုန်မြို.ကြီးမှာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ စပွန်ဆာ ကောင်းကောင်းရတယ် ဒါပေမဲ. အဲဒီကောင်မလေးက အဲလိုဘ၀ကိုအလွယ်မလိုက်ပဲ အခုလိုအမှိုက်ကောက်တဲ.အလုပ်ကို လုပ်ရဲတာကိုပဲ ကျွန်တော် တော်တော်လေးစားမိတယ်ဗျ ကျောင်းသွားရင် နေ.တိုင်းတွေ.နေရတာပေါ. ကျွန်တော်တို.တတွေတောင် ဒီကောင်မလေးပြင်လိုက်လို.ကတော. မင်းသမီးဖြစ်တယ်ဗျဆိုပြီး ကျောင်းသွားရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ. အမြဲလိုလိုပြောဖြစ်ကြတယ် တကယ်လည်းအဲလောက်ထိကို ချောတယ်ဗျ ကျွန်တော် ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာလည်း အမြဲတမ်းတွေ.ရတယ်ဗျ သူတို.က ကျောင်းထဲက ဆွမ်းဟင်း အကျန် လာလာစွန်.ခိုင်းတာဆိုတော. အမြဲလိုလိုတွေ.နေရတယ် ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်တော. ကျွန်တော်တို.လည်း ကျောင်းကိုမတက်တော.ဘူး ကျူရှင်လောက်ပဲတက်တော.တာ အဲဒီတော.လည်း အမြဲတမ်းတွေ.နေရတယ် သူကကျောင်းကိုအမြဲလာနေတာကိုးဗျ ဒါမှလည်း သူတို.လေးတွေ ၀မ်းရေးက အေးမှာလေဗျာ သူတို.အမှိုက်ကောက်တာက တစ်နေ.အိမ်ပြန်ပေးရတာဖြစ်မှာပေါ. ကျွန်တော်ကတော. သနားပြီး သူတို.ကိုအမြဲတမ်း ထမင်းလေးတွေဟင်းလေးတွေ ချန်ပေးတာပေါ. သူတို.မလာရင်တောင် တစ်ခါတစ်လေများ မျှော်နေမိသေးတယ်ဗျ စကားသာမပြောဖြစ်တာ အရွယ်တူလေးတွေဆိုတော.သူငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေတာကိုး နောက်တော. ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲဖြေပြီးတော. နယ်ကိုပြန်သွားတာပေါ. အောင်စာရင်းထွက်မှပဲ ပြန်လာတော.မယ်ဆိုပြီး စာမေးပွဲဖြေပြီးပြန်သွားရော နောက်တော. စာမေးပွဲအောင်တယ်ဆိုတော. သင်တန်းလေဘာလေးတက်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတာ ထုံးစံအတိုင်း နေ.လည်ဆွမ်းစားပေါ. ပထမ ၂ ရက် ၃ ရက်တော.သတိမထားမိသေးဘူး နောက်ရက်တွေကျတော. ခပ်ချောချောကောင်မလေး ကျောင်းထဲလာရင် မပါတော.တာကို သတိထားမိတော. သူနဲ.အတူတူလာတဲ.ချာတိတ်လေးတွေကို မေးကြည်.တာပေါ. ငါ.ညီ မင်းတို.နဲ.လာနေကျဟိုအစ်မလေး မပါဘူးလားကွဆိုတော. သူထောင်ကျနေတယ်တဲ. ကျွန်တော်လည်း ထပ်စပ်စုကြည်.တာပေါ. ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုတော. သူကမပြောဘူးဗျ နောက်ရက်ကျမှ အသက်ကြီးကြီးကောင်လေးကိုမေးကြည်.တော.မှ အဖြစ်မှန်ကိုသိရတာ အဲဒီကောင်မလေးဖြစ်ပုံက တော်တော်ကိုသနားစရာကောင်းပါတယ် ကောင်လေးပြောပြတာက ဒီလမ်းထဲမှာအစ်ကိုရာ အမြဲလှည်.နေတဲ. ရဲတွေ ၄ ယောက်လောက်ရှိတယ်လေ သူတို.ထဲက အဲဒီကောင်မလေးကို လိုက်ကြောင်နေတဲ. ရဲ.တစ်ယောက်ရှိတယ်အစ်ကိုရတဲ. ဒါနဲ.ဘာဆိုင်လို. ထောင်ကျတာလဲကွဆိုတော. အဲဒီရဲကယုတ်မာတာဗျ ကောင်မလေးက သူ.ကိုပြန်မကြိုက်တော. အာဏာနဲ.ချိန်းခြောက်ပြီး ကောင်မလေးကို အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင်.တာတဲ. နောက်ပြီးတော. ကောင်မလေးကို တကယ်မယူနိုင်တော. အမှုလိုတဲ.အခါ ကောင်မလေးကို ပြည်.တန်ဆာ လုပ်စားပါတယ်ဆိုပြီး ထောင်ထဲထည်.လိုက်တာတဲ. ဘယ်လောက်ယုတ်မာလိုက်တဲ. မြန်မာပြည်ကရဲလည်း စဉ်းစားသာကြည်.တော.ဗျာ တော်တော်ကိုလူမဆန်တာပါ ဒါများ စခန်းတွေရှေ.မှာ ကပ်ထားတဲ. ဆောင်ပုဒ်မှအားမနာ ဆောင်ပုဒ်ကတော. (ကူညီဗျစေ) ဆိုပဲ လုပ်တော.ခွေးအလုပ်လုပ်သွားတာ ဒါနဲ.နောက်ပိုင်းအဲဒီအကြောင်းလေးကို သိချင်တာနဲ. ရပ်ကွက်ထဲက ပန်းခြံထဲအမြဲအတွဲချောင်းတဲ. ကောင်တွေကိုမေးကြည်.တော.မှ ဟုတ်တယ်သားကြီးရ ငါတို.လည်း ဘယ်သိမလဲကွ အလိုတူလို.ထင်တာပေါ.တဲ. တကယ်ဆိုအဲဒီရဲနဲ.က သူမွေးရင် သူ.သမီး လောက်ပဲရှိတာပါတဲ.ဗျာ အဲဒီဖြစ်အပျက်အမှန်ဆိုတာလည်းသိရော တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ကောင်မလေးကလည်း ပိုက်ဆံမရှိ အသိုင်းဝိုင်းမရှိဆိုတော. သူတို.လိုသလို ဆွဲသုံးသွားတာပေါ.ဗျာ အရပ်သားက လုပ်သွားတယ်ဆို ခံသာပါသေးတယ် အခုဟာက ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးရမဲ.အကောင်တွေက မကာကွယ်တဲ.အပြင် အန္တရာယ် ပေးသွားတာတော. ကြားလို.တောင်မကောင်းပါဘူး အဲဒီရဲလည်း နောက်ပိုင်းတော. မတွေ.ရတော.ဘူးလို. မြင်ဖူးတဲ. အကောင်တွေကပြောတာတော. ကြားလိုက်ရပါသေးတယ် ထောင်ထဲတော. ထည်မှာမဟုတ်ဘူးနော် နယ်ပြောင်းသွားတာပဲ ဖြစ်မှာ နယ်စပ်ဘက်တွေ မှာတော. ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေ မကြာချင်မှအဆုံး ကြားနေရတာပါပဲ ကျနော် တို.မြန်မာပြည်မှာတော. ဒီအဖြစ်တွေက မထူးတော.ပါဘူး အဲလိုကောင်တွေကျတော. ရအောင်လိုက်ပြီး အာဏာကိုအလွဲသုံးစား လုပ်တဲ.ပုဒ်မနဲ. ထောင်ထဲမထည်.ပဲ အပြစ်မရှိတဲ. သူတွေပဲ အပြစ်ရှာပြီး ထောင်ထဲထည်.ကြတာလည်း ကြားလို.မကောင်းပါဘူး ပြည်သူတွေလည်း အခုလို ဘယ်လောက်တောင်ခံစားနေရသလဲဆိုတာ တွေးတောင်မတွေ.၀ံ.စရာပါပဲဗျာ မြန်မာစကားပုံ (နွားကွဲရင် ကျားဆွဲတယ်)ပဲကြားဖူးပါတယ် အခုဟာက နွားအုပ်ကမကွဲပဲ အထဲက နွားလောက်တောင် အသိမရှိတဲ.အကောင်တွေက ပြန်ဆွဲနေကြတာမို. ရင်နာစွာနဲ.ပဲ ရေးပြီးတင်လိုက်တာပါ
ရဲဆိုတိုင်း လူကောင်းလို့များထင်နေသလား။ လူကောင်းတွေကချည်း ရဲဖြစ်လာတယ်လို့ရော ထင်နေသလား။
အင်းစိန်မှာ ရဲထားတဲ့အဆောင်သတ်သတ်ရှိတယ်နော် ။ ရိုးရိုးထောင်ကျတွေထဲ ရောထားလို့ ရဲမှန်းသိသွားကြရင် ၀ိုင်းဖဲ့မှာစိုးလို့ ….။
ဒီခေတ်ရဲတွေ (ရိုးရိုးရဲတပ်သားအဆင့်ကစသူတွေ) ကို ဘယ်သူတွေက စည်းရုံးဘို့တာဝန်ရှိသလဲ။ ဘယ်လိုခွဲတမ်းတွေရှိလဲ။ ရဲတပ်သားလောင်းရဘို့ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ပစ်မှတ်ထား ရှာဖွေစောင့်ကြည့်ရသလဲ။ ရနိုင်လောက်တဲ့သူတွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုကြပ်ပြီး ငြင်းမရအောင် ချည်တုပ်ရသလဲ။ ဘယ်လို ထောက်ပံကြေး စတာတွေပေးပြီး အတင်းခေါ်ရသလဲ။
စတဲ့ …စတဲ့ … အကြောင်းတွေကို ဒီရွာထဲက အရာရှိကြီး သို့မဟုတ် တယောက်ယောက်က ဗဟုသုတအဖြစ် ပြောပေးစေချင်လိုက်တာ …။
မကောင်းတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များ ပါတယ်…
ရာဇဝင် တွင်မဲ့ ငမိုက်သားတွေပါ…။
ကျနော့်အဖေက ပြောဖူးတယ်။ ဘယ်တော့မှ ရဲလုပ်မစားပါနဲ့တဲ့။ ဘယ်လောက်ရိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်ဖြစ် ရဲထဲရောက်ရင် ပျက်သွားတာပဲတဲ့။
ကောင်မလေး သနားပါတယ် ။ သူ့ဘာ့သာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်လေးလုပ်ပြီးနေ နေတဲ့ ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးတယ် ယုတ်မာတဲ့ ရဲ တွေ ။ သေဒဏ်တောင် ပေးဖို့ကောင်းတယ် ။
ကျွန်တော့အသက် ၄၀ ကျော်ခဲ့ပြီ အခုထိေ-ာက်ကျင့်ကောင်းတဲ့ရဲ ၁ ယောက်မှမတွေ့ဖူးသေးဘူး
ကျွန်တော့အသက် ၄၀ ကျော်ခဲ့ပြီ
အခုထိေ-ာက်ကျင့်ကောင်းတဲ့ရဲ ၁ ယောက်မှမတွေ့ဖူးသေးဘူး
တိရိစ္ဆာန်ထက် ယုတ်မာတဲ့ကောင် #&#(*)($)@
အဲဒီကောင်မလေး ထောင်ထဲမှာရော သက်သာလိမ့်မယ်ထင်သလား
ထောင်ကပြန်ထွက်ရင် သူဘ၀က မတွေးရဲစရာပဲ
ကန်တော့ပါရဲ့…..ရွှေဘိုသားပြောသလို စပွန်ဆာကောင်းကောင်းရှာထားပြီးနေလိုက်ရင်တောင် ဒီလောက်ဘ၀မပျက်ဘူး
အခုဟာက စပွန်ဆာ တွေလို အပေးအယူ မဟုတ်ပဲ
ဟုတ်တယ် မိုးပွင်တို့ကျောင်းတက်တုန်က လည်ကြုံးဖူးတယ် ညပန်းခြံမှာသွားချိန်တွေတဲ ကျောင်းသား အတွဲက ကောင်းလေးကို
ကျောင်းသားကဒ်ပြန်ယူခိုင်ပြီး ကောင်းမလေးကို သားမယားပြုကျင့်လို ကျောင်းသားတွေ ရဲစခန်းရှေ့သွားခဲတွေနဲပေါက် ကျတာ အတော်ရှင်လိုက်ရတာ အဲဒီရဲကိုလဲ မတွေ့ရတောဘူး နေရာတိုင်းတော ကြုံတွေ့နေရတာတွေထင်တယ်
အဲဒါ 2003-2004 ကရွှေဘိုမြို့မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲတာ
အဓိက ကတော့ စည်းကမ်းကြပ်မတ်ပေးနိုင်ရင်
ရဲ တွေကို တကယ်အားကိုးနိုင်လာမှာပါ
အခု လို ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ အမျိုးသမီးရေးရာ က မိန်းမကြီးတွေက ဒါတွေကို မသိတာလား။
မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား …. မိန်းကလေး တွေ အတွက် သေချာ စဉ်းစားပေးပြီး အဲဒီ့အသင်းကို ဖွဲ့ထားတာရော ဟုတ်ရဲ့လား … သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေက ဘာတွေလည်း သေချာ မသိပါလား ..
မိခင်နှင့်ကလေးကိုင်ဆောင့်ရေးတို့ အမျိုးသမီးရေးမရေမရာအဖွဲ့တွေကလည်း ထိထိရောက်ရောက် သိပ်မလုပ်(နိုင်)ကြဘူး
အားနည်းသူဘက်ကလိုက်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် လိုက်မိရင်(အားအကြီးကြီးက)ကိုယ့်ကိုပြန်ပိမှာစိုးရသေးတယ်မလား (ချွင်းချက်လေးတွေနဲ့ပေ့ါလေ….)
လီကွမ်ယူရဲ့ တတိယကမ္ဘာမှ ပထမကမ္ဘာသို့ ဆိုတဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာအုပ် ဖတ်ဖူးတယ်
သူ စင်ကာပူနိုင်ငံကို တည်ထောင်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန် အရင်ဆုံး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမဲ့ ရဲလိုအဖွဲ့အစည်းကို လစာကောင်းကောင်းနဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေကို ခန့်တယ်ဆိုတာလေးမှတ်မိနေတယ်
စည်းကမ်းထိန်းရတဲ့ ရဲမှ စည်းကမ်းမရှိဘူးဆိုတာကတော့ ဖြစ်လို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့ မင်းတို့အသုံးကို မကျဘူးချည်းပဲ တဖက်သက်ပြောရင် မတရာဘူး
တာဝန်ရှိသူတွေက ရဲလို စည်းကမ်းထိန်းမဲ့သူ တည့်မတ်ပေးမဲ့သူ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ ကို လစာကောင်းကောင်းနဲ့ (နေ့စဉ် လူပီသစွာနေနိုင်တဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလဲ ရအောင် လုပ်ပေး နောင်ရေးလဲ စိတ်ပူပင်မှုရှိစရာမလိုအောင်လုပ်ပေး) သူ့အလုပ်အပေါ်ကို မြတ်နိုးဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ချင်အောင် တာဝန်ယူတတ်အောင် လုပ်ပေး ၊မရတဲ့သူကို ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုလုပ်
ရဲအကြောင်းပြောလို့ ရဲနဲ့ ဥပမာပေးရတာ တခြားလူတွေအတွက်လဲ ဒီလိုစဉ်းစားလုပ်ပေးရမှာပဲ
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် သက်သာချောင်ချိရေးကိစ္စတွေ အစိုးရကမလုပ်ပေးသေးလို့ဆိုပြီး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဥပဒေဘောင်ကျော်ပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့တော့ မရဘူး
ယုတ်မာလိုက်တာ ကိုယ့်သမီးအရွယ်လေးကိုများ စော်လဲစော်ကားသေးတယ် ထောင်လဲချတယ်ဆိုတော့
ကောင်မလေးက ထောင်က လွတ်လာရင် ဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့် သူ့ဘဝကို ရေစုန်မျာလိုက်ရင်တော့
ဒုက္ခ ။ တွေးရင်းရင်မောလိုက်တာ ….
ရွှေဘိုသား ရေ ကျွန်တော်မှာလည်း အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခု ရဲပြုတ်တစ်ယောက်ပြောပြထားတာရှိသေးတယ် ဗျ…။ နားထောင်နေရင်းနဲ့တောင် စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ပေါ့.။ ဒီရဲကမှတစ်ယောက် ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့ လူဆို ရဲလေးယောက်လောက်ဗျ..။ နောက်မှ အခွင့်သာရင်ရေးဦးမယ်ဗျာ.။
တိုင်ရင်လည်း တိုင်တဲ့သူတွေ အဖမ်းခံရတယ်တဲ့။
တရားမျှတမှု့ဆိုတာ တရားမျှတမှု့ရဲ့ အထက် လက်လှမ်းမမှီရာမှာ ရှိနေတာလား?
လဒ်စားပြီး ငွေများများရှာကြွေးနိုင်တဲ့ သူ နေရာကောင်းရ ရာထူးတိုးတယ်။
ဆရာမင်းသိင်္ခ စာအုပ်တွေထဲက မှန်ကန်မှု့အတွက် လိုက်လံဖြေရှင်းပေးနေတဲ့
ပြည်သူ့ဘက်တော်သား သူရဲကောင်းပဲ တစ်ညဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ကို ဖြစ်ခွင့်ပေးပါ။
“လုပ်ကြပေါ့ ရှင်တို့က ရဲတွေဘဲ..ပိုက်ဆံမှမပေးရတာ”
“အမျှဝေမေတ္တာပို့တဲ့ အခါ ခြ ဂျပိုး ကြွက် ပိုးဟပ် ပုလိပ် များမပါ”
“ခန္ဓာနဲ့ ရင်းစားတာ ဖါ နဲ့ ပုလိပ်”
ရွာထဲက မမိုးပွင်.ဖြူက ရွှေဘိုကလားဗျ
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တောတို.က6တန်းလားပဲရှိသေးတယ်
ကောင်မလေး သနားပါတယ်နော်.. တော်တော် ၀ဋ်ကြီးတာပဲ.. နောင်လာမဲ့ သက်တမ်း အချိန် တွေမှာ ဘ၀ကြီးက ရင်လေးစရာပဲ..
အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းများကို အရေးယူနိုင်အောင် အဖြစ်အပျက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုကြဖို့လိုလာပြီ
ကောင်းမွန်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ media တွေက အရေးအကြီးဆုံးပဲဗျာ
ခွေးလိုးမသား ဗမာပြည်ကရဲတွေ…သူတပါးငိုလဲစား..ရီလဲစား..ခွေးတတောင်းစားရဲတွေ…သူတို့အမေသူတို့နမ သူတို့မယားကို လမ်းဘေးခွေး အလိုးခံပြီး ထောင်ထဲထည့်ပါလား..ဥပဒေမရှိ မင်းမဲ့(ရှိအမည်ခံ) တိုင်းပြည် တဖြေးဖြေး ပိုဆိုးကာဖြစ်နေပါလား .. ရဲ=မော်တော်ပီကယ်=တရားသူကြီး(အတု)=အာဏာရှင် အော်မေ့လို့ ဒီကြားထဲ ပထွေးပုဆိုးအောက်ဝင် အနံခံ ရပ်ကွက်သူကြီး =မရက ..အားလုံး တတောင်းစား ကြီးနဲ့သေးဘဲကွာတယ်ဗျာ…တတောင်းစားတောင်ရိုးရီုးမဟုတ်ဘူးနော် …ခွေးတတောင်းစားတွေဗျ… ရပ်ကွက်သူကြီး နဲ့ မရက မကောင်းတာတွေသတ်သေအထောက်အထားနဲ့ တင်ပြပါမယ်
သူတို့အမေသူတို့နမ သူတို့မယားကို လမ်းဘေးခွေး….
အပေါ်က ရဲထက် ခင်ဗျားက ပိုဆိုးနေပြီ၊ စာဝင်ဖတ်တာက လူပေါင်းစုံဆိုတော့ အများဖတ်လို့
nozomi ရယ်ပြောပါစေ … ဒါမှလည်း သူ့ ကို ဥပဒေဘက်တော်သားချင်း အတူတူ တဂိုဏ်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ … ရွာသူရွာသားတွေ ထင်ကြမှာ … ။ ဟီးဟီး …
အရေးသားကြမ်းတာတော့ … ဆဲနေကြကိုး.. ဟိုးဟိုး ဟိုး ဟိုး
ရဲတော်တော်များများ အကျင့်ပျက်ကြတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ရဲနဲ.တတ်နိုင်သမျှမပါတ်
သတ်အောင်နေဘို.ပါဘဲ။ ဆိုလိုတာက ဥပဒေကတားမြစ်ထားတဲ့ဟာတွေတတ်ိုင်သမျှမလုပ်မိပါစေနဲ.။ လုပ်မိလို.ကတော့သုတို.ကဖမ်းမှာပါဘဲ။ မဖမ်းစေချင်ရင်တော့လာဘ်ပေးရမှာပေါ့။သူတို.ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုး။ ဘယ်သူရဲ.လက်ထဲကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်
အာဏာထည့်ပေးလိုက်ရင်အာဏာအတိုင်းလုပ်မယ်။ အာဏာထက်ပိုလုပ်မယ်။ဘယ်သူမှအာဏာထက်လျှော.မလုပ်ဘူး။ နေရာတိုင်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကာစတန်ကိုသွားရင်အခွန်တွေကောက်မယ်။နဲနဲဘဲပေးဆောင်ချင်ရင်ကာစတန်ကိုပေးရမယ်။ လ၀က ကိုသွားရင်လ၀ကကိုပေးရမယ်။ ဆေးရုံသွားရင်ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကိုပေးရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်
ကျေးဇူးပြု ၍ ရဲများကို ခွေးနဲ့ မနှိုင်းပါနဲ့ …ခွေးက အများကြီး သာပါတယ်…ခွေးတွေက သစ္စာ၇ှိတယ်..အသုံးဝင်ပါတယ်…မယုတ်မာတတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားကားတွေမှာ ကြည့်ဘူးတယ်။ ရဲတွေ မဟုတ်တာလုပ်တာ၊ ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး မကောင်းမှုလုပ်တာ တွေ ရိုက်ပြထားတာ။ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုရင် မကောင်းမှု ဘာမှမလုပ်၊ လဘ်မစား၊ ချဲမထိုး အင်မတန်မှ မြင့်မြတ်တဲ့ လူမျိုးတွေလို့သာရိုက်ပြလို့ရတယ်၊ ရဲ ဆိုတာလည်း လူသားတွေပဲ၊ ကောင်းတာမကောင်းတာ ရှိမှာပေါ့၊ မကောင်းရင် ဥပဒေအရအရေးယူရမှာပေါ့၊ ရုပ်ရှင်တွေမှာ ထည့်ရိုက်ခွင့်ပြုရမှာပေါ့။ ရုပ်ရှင်သမားတွေကို မေးသာကြည့်ကြပါ။ ပြည်သူ့ရဲတွေကို အပြင်မှာ မပြောနဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတောင် အရေးယူလို့မရပါ ခင်ဗျား။ ဟဟ
ကျွန်တော်အိမ်ကပြောတယ်.. ရဲတို့ စစ်တပ်တို့ထဲဆိုရင် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မ၀င်နဲ့တဲ့..
ကျွန်တော်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့ရဲတွေကိုအရမ်းအမြင်ကပ်တာ ရန်တောင်ဖြစ်ချင်တယ် .. စိတ်လျှော့ထားတာ သူတို့ခေတ်မို့လို့လေ
အကျင်းပျက်ခြစားပြီး စည်းကမ်းပျက်နေတာကြာပါပီ။စိတ်လည်းကုန်ပါပီ။မိုက်ချက်ကကမ်းကုန်လွန်းပါတယ်။မရှိလို့ လုပ်စားပါတယ် သူခိုးယိုးခံရနေပြန်ပါပီ။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေက ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ရင်နဲ့ မဆံ့အောင်ကြားနေရပါတယ်။
သူတို့ တွေ မဟုတ်မဟပ်တာတွေ လုပ်တာသိရပြန်တော့ ပို့စ်လေး တွေ အလျင်းသင့်သလို တင်မိပါတယ်
(သူတို့ဆိုတာက အာဏာရှင်အုပ်စု ပါ..)
အဲ့ဒီ သူတို့ မှာ လဲ သူတို့အတွက် ဖြေရှင်းပေးမဲ့ ရှေ့နေ တွေကလဲ ရှိနေသေးသဗျာ
ဘဝင်မြင့် အထက် လေစားနေတဲ့ ထွေအုပ် ၊ ရဲ တွေ ရဲ့လုပ်ချက်တွေ တင်မိလို့ အဖဲ့ခံရတာ တော့စိတ်နာတယ်
သူတို့တွေ ကိုယ်စားလိုက်ပြောပေးနေတဲ့ သူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုး လဲ..?